Daawo Sawiro:- Rag lasheegay in la shaqeeynayeen Al-Shabaab oo lagu qabtay magaalada Muqdisho – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDaawo Sawiro:- Rag lasheegay in la shaqeeynayeen Al-Shabaab oo lagu qabtay magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, Sep 28, 2017:- Ciidamada Booliiska Soomaaliyeed ayaa Warbaahinta u soo bandhigay shaqsiyaad sida ay sheegeen warqdaha digniinta ah u daabici jiray Al-shabaab iyo qalabkii ay u adeegsan jireen intaba.
Raggan la sheegay in ay qori jireen warqadaha digniinta ah iyo warqadaha dacwada aay ku qaadan ayaa la qabtay kaddib markii degmada Dherkeenley ee gobolka Banaadir ku daadiyeen sida ay saraakiisha amniga sheegeen warqado ay dhalinyarada uga digayaan in ay ka mid noqdaan mashruuca shaqo abuurka ee gobolka Banaadir.
Saraakiisha ayaa intaa ku darray in ay raggan heysteen qalabka wax lagu daabaco ee RZ iyo IR sida ka muuqato sawirada ay soo bandhigeen laamaha amniga ee dowlada Soomaaliya.
Waxaa seddexdaas nin ee la soo qabtay ka mid ah Maxamed Yare oo dadka reer Muqdisho intooda badan u garanayaan Idaacada Wareegta oo ku caabaxay jilitaanka codadka siyaasiyiinta Soomaalida qaarkood markii danbana ku iibin jiray magaalada Qoraallo la xiriira dhacdooyinka yaabka leh ee dunida ka dhaca iyo sheekooyin aad loo jecleysto.
Xarunta ragaan laga soo qabtay ayaa lagu magacaabaa INNA FATAX, o ku taalaa degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho.
Somali Teenagers Flee Al-Shabab Recruitment Campaign Share